Saika nifanindry ohatra omaly ny hetsika mifandraika amin’izany, nataon’ny minisitry ny Fanatanjahantena, Ndremanjary Jean André, sy Ramamonjisoa Virapin, minisitra teo aloha sady filohan’ny Virapun Group, izay antoko politika noforoniny.
Vola 1 tapitrisa ariary avy no natolotr’ireto olobe roa ireto tamin’ny ray aman-drenin’i Zarah. Ny filohan’ny Virapun Group no nisantatra ny fankasitrahana omaly antoandro tetsy amin’ny tranon-dray aman-drenin’i Zarah tetsy amin’ny Cnut tetsy Ambohibao.
« Efa nampanantena aho fa hanampy an’i Zarah hatrany raha mitohy ny vokatra tsara omeny ny firenena malagasy, na dia tsy minisitra intsony aza. Amin’ny maha samy olon-tsotra anay no hanolorako izany ary efa niteny tamin’ny minisitra Ndremanjary Jean André aho nialoha ny nandehanako tety », hoy i Virapin Ramamonjisoa, hoy ingahy minisitra teo aloha.
Tetsy andaniny, nomarihin’i Jean André Ndremanjary tetsy Ambohijatovo fa efa misy ny « barème » napetraka eo anivon’ny minisitera iandraiketany, mikasika ny fanampiana ara-bola homena ny mpanao fanatanjahantena nahazo amboara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Tsara ho an’ny atleta malagasy ny fifaninanana hafahafa tahaka izao. Tamin’ity indray mitoraka ity izao dia i Zarah no tena nahazo tombony.
Maromaro ny fihetsika tahaka izao. Tsy harisika tokoa ve ny mpanao fanatanjahantena raha ireo antoko politika an-jatony ireo no hilahatra hanome fanampiana. Ny tsininy kely fotsiny dia isika toa miha sakaizan’ny mpandresy hatrany hatrany.